Rugby – «Amboaran’ny filoha» : hiady ny famaranana Antsinanana sy Diana | NewsMada
Rugby – «Amboaran’ny filoha» : hiady ny famaranana Antsinanana sy Diana
Tontosa omaly zoma tetsy amin’ny kianja Makis Andohatapenaka ireo lalao manasa-dalana roa, hiadiana ny “Amboaran’ny filoha”, ho an’ireo ligim-paritra.Tafita hiatrika izany ny ekipan’Antsinanana sy Diana. Niady ny fihaonana ary tena nampitsanga-mitoetra hatramin’ny farany. Anisan’izany, ny fihaonana teo amin’Antsinanana sy ry zareo avy any Alaotra Mangoro. Tamin’ny moka fohy, 38 no ho 37 no nivoahan-dRasaraka, ho mpandresy, nanoloana an-dry Legaona. Nifandimbiasana ny fanafihana sy ny nitarika ny isa teny amin’ny solaitra be. Samy nahatondra baolina nentin-tanana avokoa, ny andaniny sy ny ankilany. Efa tany amin’ny minitra farany vao nahazo ny tapakila hiakarany amin’ny famaranana ry zareo Antsinanana.
Nafana vay toy izany koa ny lalaon’ny Vakinankaratra sy Diana, izay nisaraka tamin’ny isa, 13 no ho 17. Nanantombo ara-batana ry zareo avy any Avaratra, nanoloana ny Vakinà. Na izany aza, nanohitra hatramin’ny farany ny mpilalaon’Antsirabe. Efa nitarika tamin’ny isa, 13 no ho 12 izy ireo no nahatsindry baolina ny Diana ka nibatany ny fandresena.
Hotanterahina, rahampitso alahady ny famaranana, eo amin’Antsinanana sy Diana. Mialoha io fihaonana io, hiady ny laharana fahadimy ny TFA Anatihazo sy ny SCB Besarety ary hanao lalao fihantsiana kosa ny Cosfa sy ny FTA Andavamamba, ny maraina manomboka amin’ny 11 ora antoandro.